Wholesale Graphene fanafanana maska ​​mpanamboatra sy mpamatsy | Sheerfond
Sarom-bava manafana graphene ity. Ity vokatra ity dia natao indrindra hanamaivanana ny havizanan'ny maso sy hampiroborobo ny fivezivezy. Ny fitaovana fanafanana dia mampiasa fitaovana graphene. Rehefa hafanaina ireo akora graphene dia afaka mamoaka onja-infrared lavitra izy ireo, izay afaka mampisondrotra ny ran'olombelona. Mivezivezy, manamaivana ny havizanan'ny maso.
Ity vokatra ity dia mampiasa heaters coating graphene, izay ny kojakoja fanafanana fototra, novokarin'ny orinasanay, ary ny orinasanay dia manana ekipa fikarohana sy fampandrosoana ho an'ny graphene vaovao izay nanova orinasa. Ny vovo-graphene novokarintsika dia namboarina ho ravina graphene tamin'ny alàlan'ny teknolojia patanty ananantsika, ary avy eo dia natonta tao amin'ny substrate PI ny ravina graphene, ary namboarina tamin'ny faran'ny takelaka fanamainana graphene ny electrodes.
Rehefa any amin'ny birao na any an-trano ianao dia mila fiatoana atoandro, na miala sasatra ny masonao, dia azonao atao ny misafidy ity vokatra ity hampiroborobo ny rà mandriaka amin'ny famatrarana mafana, izay afaka manamaivana haingana ny havizanan'ny maso.
Mila charger 5V2A na banky herinaratra hampandehanana azy io, izay mora ampiasaina.
Ity vokatra ity dia manana kodiarana telo, ny maripana dia 30 ℃, 37 ℃ ary 42 ℃, azonao atao ny misafidy ny fitaovana arakaraka ny filanao.
Rehefa manasa ny sarontava-maso dia esory ny mason-tsakafo hampiakarana ny masom-borona mba hiarovana ny singa fanafanana amin'ny fahasimbana
Ny vokatra dia manana androm-piainana maharitra ary afaka miasa maharitra mandritra ny 5000 ora.
Ny vokatra dia fanomezana mamorona vaovao ary mora vidy, ary mety kokoa amin'ny fanomezana fampiroboroboana, fanomezana fandraharahana, fanomezana eo amin'ny fianakaviana sy ny namana, toy ny fanomezana ho an'ny Fetin'ny Reny, fanomezana krismasy
Haben'ny vokatra 220mm * 100mm * 10mm
lanjan'ny vokatra 25g
Haben'ny fonosana 225mm * 105 * 24mm
Teo aloha: Fametahana famandrihana tsy misy tariby
Manaraka: Volom-baravarana fanafanana Graphene